ပြည်သူများ၏ စပါးခင်းကို ကူသိမ်းပေးသည့် KNLAတပ်ဖွဲ့၀င်များ - Myanmar Pressphoto Agency
KNUထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင် နေထိုင်ကြသည့် ဒေသခံပြည်သူများ၏ လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်များကို KNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်က စပါးရိတ်သိမ်း ကူညီပေးခဲ့ကြသည်။
ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် KNLAသည် စပါးရိတ်သိမ်းချိန်များတွင်သာမက လယ်ထွန်ချိန်၊ စပါးစိုက်ချိန်၊ တောင်ယာလုပ်ချိန်နှင့် မြေပဲစိုက်ချိန်များတွင် ပြည်သူလူထု၏ စားဝတ်နေရေးအတွက် ဝင်ရောက်ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးမြဲဖြစ်သည်။
ပြည်သူ့စည်းစိမ်ဥစ္စာ ကာကွယ်ပေးရသည့်အချိန်တွင် အသက်ကိုစွန့်ကာကွယ်ပေးပြီး အားလပ်ချိန်များတွင် လူထုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများယခုလိုမျိုး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလေ့ရှိသည်။
KNLA Troops Helping Reap People’s Rice Field
The KNLA force members helped with reaping rice in the fields of the people in KNU-controlled territory.
The Karenni Nationalities Liberation Army (KNLA) has always helped the people there with basic needs, not only with reaping rice but also in plowing time, growing rice, shifting cultivation work and pea planting.
Inatime of protecting the people’s properties, they risk their lives protecting the people and do people-benefiting works in their free time.
Tags: KayinState KNLA KNU Myanmar Pressphoto
Previous: ရှေ့တက်မလာနဲ့ တက်အုပ်ပစ်မယ် LGBT သပိတ်
Next: ဒေဝါလီနေ့(ခေါ်)ဒီပါဝလီနေ့ကို တိုးတိုးတိတ်တိတ်သာပြုလုပ်